Mandehandeha mamakivaky an'i Saint Patrick's Ireland
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Mandehandeha mamakivaky an'i Saint Patrick's Ireland
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Irlandey • Kolontsaina • Vaovao • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fetin'ny Masindahy Patrick
Fa maninona isika no mifampiarahaba ny Andron'ny Masindahy Patrick Patrick amin'ny 17 martsa - tsingerintaona nahafatesan'ny Olomasina tamin'ny taona 461?
Saint Patrick dia anglisy, tsy irlandey, ary teraka tamin'ny ray aman-dreny romana ho Maewyn Succat izay novana ho Patricius ny anarany.
Araka ny angano dia nalain'ny Irlandey i Patrick ary noterena ho andevo.
Ny andron'i Saint Patrick dia nifandray tamin'ny loko maitso taorian'ny nampifandraisina tamin'ny hetsika fahaleovan-tena Irlandey tamin'ny faramparan'ny taona 1700.
Ny 17 martsa dia manamarika ny fankalazana isan-taona ny Andron'ny Saint Patrick, na Lá Fhéile Pádraig amin'ny teny irlandey. Teraka "Maewyn Succat" i Patrick fa nanova ny anarany hoe "Patricius" taorian'ny naha pretra azy. Britanika izy fa tsy Irlandy, ary teraka tamin'ny ray aman-dreny romana. Ny ankamaroan'ny angano dia milaza fa nalain'ny Irlandey izy ary noterena ho andevo.
Nanomboka nandinika ny mpifindra monina Irlandey Andron'i Md tany Boston tamin'ny 1737, ary ny diabe voalohany nataon'i St. Patrick dia natao tany New York City tamin'ny 1762 tamin'ny alàlan'ny tafika anglisy.
Masindahy Patrick tsy nanao maintso. Ny lokony dia ny “manga an'i Patrick Patrick,” ny lokon'ny sainam-pirenen'i Irlanda. Ny loko maitso dia nifandray tamin'ny Andron'ny St. Patrick taorian'ny nampifandraisina tamin'ny hetsika fahaleovan-tena Irlandey tamin'ny faramparan'ny taona 1700.
Amin'ny dia FAM mankany Irlandy niaraka tamin'i Collette Tours, nitsidika toerana maromaro nifandray tamin'i Saint Patrick izahay. Katedraly Saint Patrick ao Irlanda Katedraly any Armagh dia inoana fa naorina teo ambonin'ny fiangonana vato naorin'i Saint Patrick tamin'ny 445 AD. Katedraly Down any Downpatrick dia inoana fa toerana nandevenana azy taorian'ny fahafatesany tamin'ny 461 AD.
Croagh Patrick, any Westport, County Mayo, dia tendrombohitra izay voalaza fa nifady hanina teo amin'ny tampony 40 andro sy alina i Saint Patrick. Mivory eny an-tendrombohitra ny mpivahiny mba hankalaza ny fitiavan'ny Patrick.
Slemish Mountain any County Antrim, Irlandy Avaratra, no inoana fa niasa andevo nandritra ny 6 taona i Saint Patrick.
Ny Rock of Cashel, County Tipperary, no seza fiandrianan'ny mpanjaka Munster (Irlanda Andrefana) tamin'ny voalohany. Welsh ny razamben'izy ireo.
Ny fianakaviako dia manana fifandraisana manokana amin'i Saint Patrick. Ny firaketana britanika dia manoratra ny razambeko hiverina any Dermot MacMurrough, King of Leinster. Raibeko dadabe faha-25 izy. Ny literatiora irlandey dia nitantara ny razamben'i Dermot niverina tany Óengus mac Nad Froích - Aengus, mpanjaka kristiana voalohany tao Munster. Ny Mpanjaka Aengus, razambeko mivantana, dia nataon'ny Kristiana Patrick Patrick nanao batemy kristiana tao amin'ny seza fiandrianan'i Cashel.
Patrick dia voalaza fa nahavita asa lehibe maro, saingy mazava fa ny fanomezana lehibe indrindra nomeny dia nanova ny fizotran'ny sivilizasiona araka ny ahalalantsika azy. Izy no tompon'andraikitra tamin'ny fitondrana literatiora tany Irlandy. Very tanteraka ny fahaizana mamaky teny sy manoratra nandritra ny vanim-potoana maizina, izay nanomboka taorian'ny nanonganan'ireo Visigoths alemà an'i Roma ary nandoro ireo tranomboky. Ny kanto, ny kolontsaina, ny siansa ary ny governemanta dia miorim-paka ao amin'ny lahatsoratra taloha izay, noho i Saint Patrick, tafavoaka nandritra ny an'arivony taona maro. Ny Iliad, The Odyssey, The Aeneid, Plato, Aristotle, The Old and New Testament dia azo antoka fa ho very mandrakizay raha tsy i Patrick no nanangana ny hetsika monastic izay naka tahaka sy nitahiry ireo lahatsoratra taloha. Izay rehetra any amin'ny tany andrefana mahay mamaky teny sy manoratra dia manana trosa feno fankasitrahana an'i Saint Patrick noho izy nahatanteraka izany.